I-Semalt: Iyini i-Ratware? Izibonelo Ezicacile Zemiyalezo Ye-Ratware Mailout
I-Ratware wuhlobo lwe-imeyli yogaxekile edala, ehambisa futhi ithumela i-malware ngamathekisthi nezinamathiselo ze-imeyili. Lolu hlelo oluthile lusetshenziswa abaduni bezobuchwepheshe kanye nabakwa-spammers ukuze bahlukane nenani elikhulu labama-webmasters, abasebenzisi be-blogger nabasebenzisi be-imeyili abanama-imeyili angabonakali. Bahlose ukukhangisa izidakamizwa nezinsiza zobulili ezingcolile ngokusebenzisa i-ratware noma ukuzama ukuheha abasebenzisi kwi-imeyili ebugebengu bokuphanga.
UMichael Brown, i- Semalt iMenenja yeNtuthuko yeKhasimende, uchaza ukuthi i-ratware ngezinye izikhathi idukisa noma ichithe amakheli e-imeyli avela kuwo azothumela khona ugaxekile - eva moist ??????? ????. Amakheli e-imeyli amanga avame ukubamba i-ID yomuntu osemthethweni, enjalo frankjohn@microsoft.com. Lezi amakheli omthombo ziwuphawu lokuthi uhlaselwe yi-ratware nama-spammers ochwepheshe.
Izibonelo zemilayezo ye-Ratware Mailout:
Izibonelo ezivame kakhulu zemilayezo ye-ratware yilezi:
Siyimithi edumile kunazo zonke kanye nenkampani yekhemisi (i-peddling pharmaceutics);
Uthole i-Insta-Kisses ngu-Selena Gomez (lokhu kuhlaselwa kobugebengu obuyingozi) kuzoba imininingwane yakho ebucayi njengemininingwane yekhadi lesikweletu);
Ama-Steamy Hot Lesbian Girls afuna ukukhuluma nawe kumakhamera aphile (ukuhambisa izithombe ezingcolile kanye nezinto ezibucayi);
Ividiyo ye-Mortgage yamahhala engu-30 yamahhala etholakalayo lapha (lokhu kuyindlela yokweba ubunikazi);
Shesha uphinde uthintane nomphefumulo wakho womphefumulo ngaphambi kokuphuza kakhulu (lokhu kuyiphampu ye-pump kanye nokulahla i-imeyili);
Uthole izithombe namavidiyo amasha angu-15 amasha (ama-scams);
Uhlala kuphi noma uphi? (futhi futhi uhlobo lwezithombe ezingcolile zobulili);
Amanani amaningi okuthengisa angabizi nge-iPad atholakalayo lapha (ukukhwabanisa okuphanga);
Kungani i-ratware ingenkinga?
I-Ratware ngokuvamile iyenzeka ukwenza imisebenzi ehlukahlukene. Okokuqala, ixhuma kwisiphakeli sakho se-intanethi noma uxhumano oluyimfihlo futhi ithatha izinhlelo zakho ze-imeyili unomphela. Okwesibili, ithumela ama-imeyili ahlukahlukene kubasebenzisi abaningi ngesikhathi esifushane kakhulu usebenzisa amakhompyutha aphangiwe. Okwesithathu, ihlukanisa uxhumano lwakho lwe-intanethi ukwenza ezinye izinto ezinonya ngasese. Okwesine, liphinda izenzo zalo kanye noma kabili ngosuku ngaphandle kokukwazisa ukuthi abakwa-spammers basebenzisa uhlelo lwakho lwekhompyutha.
Uphi i-ratware ithola amakheli wakho we-imeyili?
Abahlaseli be-spammers bezobuchwepheshe basungula amasu ahlukahlukene ukuze bangenele ama-ID wakho we-imeyili, futhi bahlose ukweba idatha yakho yangasese bese udlulisela imali yakho kusuka kwelinye i-akhawunti yasebhange kuya kwenye. Kungenzeka bafake amagciwane / i-malware kumasistimu noma i-ratware yakho kuma-imeyili asolisayo. Ngokuvamile, i-ratware ifakwa kumakheli ethu e-imeyili ngezindlela ezine ezihlukene: uhlu oluvunyiwe, uhlu lwesichazamazwi, uhlu lwamakethe omnyama, futhi lukhiphe uhlu lwama-scam.
Indlela yokukhipha i-ratware? Ingabe ikhona isofthiwe yokubhekana nayo?
Ngeshwa, ngeke uthole noma iyiphi i-anti-ratware ithuluzi kwi-intanethi njengoba i-malware enamandla futhi ayikwazi ukuvinjelwa ngezinhlelo ezijwayelekile noma amathuluzi. Kodwa-ke, ochwepheshe baye badala imikhiqizo kanye nezinhlelo zokusebenza ezenza ngokuyimfihlo ku-ratware nokuqinisekisa ukuphepha kwakho. Lezi zinhlelo zokulwa ne-ratware zithengiswa ngamanani anzima, phakathi kwamaqembu athembekile futhi azikwazi ukutholakala kumawebhusayithi e-software ajwayelekile. Njengoba uhlelo lwe-anti-ratware lusemthethweni futhi lufuna kakhulu, kuzodingeka ukhokhe okuthile kusuka ku-$ 100 ukuya ku-5,000,000 ukuze uthole ukufinyelela kwayo futhi ulahle i-ratware ngezinga elithile.